Akụkọ Daniel Alvarado na Martech Zone |
Edemede site na Daniel Alvarado
Daniel Alvarado bụ ọkachamara n'ịre ahịa dijitalụ na VP nke Teknụzụ na Mgbasa ozi White Shark. Ọ bụ ya na-ahụ maka isi n'ihu otu ndị mmepe ọkwa ụwa n'azụ White Shark Media's Compass, ihe niile na-enye ohere maka ire ere maka ụlọ ọrụ na-achọ ịbawanye pọtụfoliyo Pay-per-Click ha. Daniel nwere ihe karịrị afọ 8 nke ahụmahụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa. O nyela nkwado ma site na atụmatụ ịzụ ahịa yana echiche mmepe ngwanrọ n'ofe ọrụ dị iche iche, gụnyere Digital Advertising Manager, Software Architect, na VP of Tech. N'ịbụ onye nwere nnukwu nkà na ụzụ, Daniel na-enyere òtù dị iche iche aka iji nkà na ụzụ mepụta ahụmahụ bara uru, mee ka ọrụ ndị dị mgbagwoju anya dị mfe na ịmepụta uru maka ndị ahịa ha.
N'ime ụwa ahịa dijitalụ, ngwá ọrụ inye aka ahịa dị mkpa maka ụlọ ọrụ iji nye ndị ọrụ ihe onwunwe dị mkpa iji tinye ngwaahịa ndị ahịa nke ọma. Na-atụghị anya ya, ụdị ọrụ ndị a na-achọsi ike. Mgbe emebere ya ma jiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ha nwere ike ịnye ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ ngwa ọrụ dị mkpa iji wepụta ọdịnaya dị elu, dị mkpa nye ndị na-achọ ịzụ ahịa. Ngwá ọrụ enyere ire ere dị oke mkpa maka inyere ụlọ ọrụ aka ijikwa ma mezie usoro ịre ahịa. Enweghị ha, ọ dị mfe